Mametraka Fangatahana Hamindràna Fonja Ilay Rosiana Gadra Politika, Ildar Dadin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2017 3:01 GMT
Nandritra ny 37 andro, tsy nisy nahalala ny zava-nanjo an'i Ildar Dadin. Ny 7 Desambra 2015, nomelohana an-tranomaizina eo amin'ny telo taona eo i Dadin, Rosiana mpikatroka mafana fo avy amin'ny mpanohitra, noho ny fidirany tamin'ny hetsi-panoherana manohitra ny governemanta Rosiana. Fa taona iray taty aoriana, tsy fantatra mihitsy ny toerana nitazonana azy ao amin'ny rafitry ny fonja Rosiana, ary na teo aza ireo fitarainana avy amin'ireo mpanao hetsi-panoherana sy ireo mpikambana amin'ny fianakaviany, tsy nanaiky nilaza ny toerana misy azy ireo tomponandraikitra. Ny farany, ny voalohandohan'ny volana Janoary, nilaza tamin'ny vadin'i Dadin, Anastasia Zotova, ireo tomponandraikitra avy ao amin'ny Sampan'ny Fonjam-Panjakana any Rosia (FSIN), fa notazonina ao amin'ny Altai Repoblikan'i Rosia ny vadiny.
Amin'izao, latsaky ny volana iray taty aoriana, nametraka fangatahana tany amin'ny FSIN tamin'ny alalan'i Zotova i Dadin, nangataka mba hafindra akaikikaikin'ny tranony any Maosko. “Tsy nisy fonja akaikikaiky an'i Maosko mihitsy ve?” Hoy ny sampanan'ny fifandraisam-panjakana Rosiana TASS namerina ny tenin'i Zotova, araka ny nolazainy tamin'ny 26 Janoary.
Nankalaza ny filazàna ny toerana nisy azy ireo mpanohana an'i Dadin, ao amin'ireo lahatsoratra ao amin'ny media sosialy, miaraka amin'ilay vehivavy iray milazalaza io ho vaovao tsara indrindra tamin'ny taona 2017. Niverimberina tao amin'ny vondrona Facebook #FreeDadin io fihetseham-po io, vondrona izay misy mpikambana maherin'ny 2.000. Na teo aza ireo fanamarinana vao haingana ny toerana misy an'i Dadin, mbola manohy mandefa fankaherezana an'ireo mpanao hetsi-panoherana ihany ilay vondrona, tafiditra amin'izany ireo sarin’ ireo vehivavy any St. Petersburg mitondra takelaka ahitana ireo sarin'i Dadin manao hetsi-panoherana. Nitohy nanerana ny firenena ny fanohanana ho an'i Dadin, miaraka amin'ireo olona teo amin'ny 40 teo voasambotra tany Maosko ny 14 Janoary taorian'ny nanaovana hetsi-panoherana mangina mba hanohanana ilay mpikatroka mafana fo.
Tsy vaovao amin'ny fifanenjehana miaraka amin'ny governemanta Rosiana akory i Dadin. Talohan'ny fanagadràna azy, Dadin, teratany avy ao Maosko, dia mpitsikera nalaza ny fitondran'i Poutine, tafiditra amin'izany ny adin'io any Okraina ary ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fahampian'ny mangarahara izay miantraika amin'ireo fifidianana. Talohan'ny fisamborana azy ny volana Desambra, efa maherin'ny in'efatra izy no nampandoavina onitra noho ireo fanafintohinana ara-politika, ary efa notazonina mihitsy ny volana May 2012 noho izy tafiditra tamin'ny hetsi-panoherana am-pilaminana manohitra ny famoretan'ny governemanta an'ireo mpanao hetsi-panoherana ny voalohandohan'ny volana nialohan'ny nandraisan'i Poutine ny fahefàna tamin'ny fitondràny fanintelony.
Tamin'izy nogadraina ny taona 2015 ny farany, lasa voalohany ary mbola hany olona niharan'ny fanamelohana eo ambanin'ny Andalana Faha-212.1 i Dadin, lalàna izay mandrrara ny “fanitsakitsahana miverimberina ny lalàna momba ny fitantanana na fikarakarana fanaovana fivoriana, fifamoriana, hetsi-panoherana, diabe na fitsatohana,” lalàna izay nanan-kery voalohany ny fahavaratry ny taona 2014.
Lasa nisy fanarahamaso iraisam-pirenena tamin'ny fanagadràna an'i Dadin, miaraka amin'ireo media eo an-toerana sy ireo fikambanana miaro ny zon'olombelona milaza amin'ny antsipirihany ireo fanitsakitsahana maro nozakainy. Vao mainka io nitombo tamin'ilay taratasy nosoratany ho an'ny vadiny ny 31 Oktobra 2016. Ilay hafatra, izay navoaka an-tsokosoko tao amin'ny fonja tamin'ny alalan'ny mpisolovava azy, dia manambara ireo fepetra mampahonena iainan'i Dadin ao amin'ireo figadràna Kareliana N7, manomboka amin'ireo fandrahonana fanolanana ka hatramin'ny fanalam-baràka ataon'ireo tomponandraikity ny famaizana—tonga dia navoakan'ny vadin'i Dadin haingana ho fanta-bahoaka moa io vaovao io.
Nahatonga onjanà fihetsika haingana teo amin'ireo mpikatroka mafana fo ara-politika any Rosia ny fomba fitondràn'i Rosia an'i Dadin. Eo am-panangonana sonia ankehitriny ny Change.org, manandrana ny hanàla tanteraka ireo fiampangàna azy, fanangonan-tsonia izay natomboka ny volana Novambra 2016. Taorian'ny namoahan'ny vadin'i Dadin ilay taratasy nosoratany tao am-ponja izay milaza ireo fanararaotana natrehany, nankany amin'ny ministeran'ny fitsarana ireo mpanao hetsi-panoherana nangataka hoe hoentina araky ny lalàna izy ao am-ponja. Nisy vehivavy iray nitondra takelaka mivaky toy izao “Nasian'izy ireo rojo vy i Dadin ary nisy lehilahy 12 nidaroka azy noho ny nidinany an-dàlana nitondra takelaka fanoherana. Voararan'ny lalàna Andalana Faha-21 ao amin'ny lalàm-panorenana Rosiana ny fampijaliana.” Kanefa, tsy namaly nanao hetsika mazava tamin'ilay hatezerana ny governemanta, fa nilaza indray aza hoe tsy voahitsakitsaka izany mihitsy ireo zon'i Dadin. Fa na hita tao amin'ny rafi-pigradràna Rosiana aza i Dadin, mbola tsy mazava ny hoaviny.